အသင်းတစ်သင်းတည်းတွင် ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုး ၁ဝဝ စံချိန်ကို စီရော်နယ်ဒို ရရှိ၊ နောက်တစ်ဆင်?? - Yangon Media Group
အသင်းတစ်သင်းတည်းတွင် ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုး ၁ဝဝ စံချိန်ကို စီရော်နယ်ဒို ရရှိ၊ နောက်တစ်ဆင်??
ရီးရဲလ်တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒိုသည် ပီအက်စ်ဂျီနှင့်ပွဲတွင် အရေးပါသောဂိုးနှစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အသင်းတစ်သင်းတည်းတွင် ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၁ဝဝ ကျော်သွင်းယူနိုင်သည့်စံချိန်ရရှိခဲ့သည်။
စီရော်နယ်ဒိုသည် အိမ်ကွင်းတွင် ကစားခဲ့သော ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ပ-အကျော့ပွဲစဉ်တွင် အသင်းအတွက်ချေပဂိုးကို ပင်နယ်တီမှတစ်ဆင့်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၁ဝဝ ပြည့်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဒုတိယပိုင်း၌ ရီးရဲလ်အတွက် နောက်ထပ်ဂိုးတစ်ဂိုးထပ်မံသွင်းယူ ပေးနိုင်ခဲ့ရာ စီရော်နယ်ဒိုအနေဖြင့် ရီးရဲလ်တွင်ကစားစဉ် ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၁ဝ၁ ဂိုးသွင်းယူနိုင်သည့်စံချိန်ကိုရခဲ့သည်။ ပီအက်စ်ဂျီဘက်သို့သွင်းယူနိုင်ခဲ့သော ဂိုးနှစ်ဂိုးအပါအဝင် စီရော်နယ်ဒိုအနေဖြင့် ၎င်း၏ကစားသမားဘဝတွင် ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုး ၁၁၅ ဂိုးအထိရှိလာခဲ့ပြီး အသင်းတစ်သင်းတည်းတွင်ကစားပြီး ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုး ၁ဝဝ ပြည့်ခဲ့သော ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ကာ ¤င်းနှင့်အနီးဆုံးပြိုင်ဘက်မှာ ၉၇ဂိုးသွင်းယူထားသော မက်ဆီဖြစ်ခဲ့သည်။
စီရော်နယ်ဒိုအနေဖြင့် ချန်ပီယံလိဂ် နောက်ဆုံး ၁၂ ပွဲတွင် ဂိုး ၂ဝ အထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုရာသီတွင် တစ်ပွဲလျှင်အနည်း ဆုံးတစ်ဂိုးနှုန်းသွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ကာ ချန်ပီယံလိဂ်ခုနှစ်ပွဲဆက် အနည်းဆုံး ၁ဝ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရီးရဲလ်အနေဖြင့် အိမ်ကွင်းတွင် ပီအက်စ်ဂျီကို စီရော်နယ်ဒို၊ မာဆယ်လိုတို့၏သွင်းဂိုးများဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ခြင်းကြောင့် နောက် တစ်ဆင့်တက်ရန် အခြေအနေကောင်းသွား သော်လည်း ပွဲမပြီးသေးသဖြင့် ပါရီကွင်းတွင် ရလဒ်ကောင်းရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း စီရော်နယ်ဒိုက သတိပေးခဲ့သည်။
စီရော်နယ်ဒိုက ”ဒီပွဲမှာ ပရိသတ်တွေထံကနွေးထွေးမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီး သူတို့ရဲ့အား ပေးမှုက အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ မာဆယ်လိုအနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ သူ့အတွက်ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဂိုးတွေလည်းသွင်းနိုင်သလို အသင်းကလည်းနိုင်ပွဲရ ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မသေချာသေးတာကြောင့် ပါရီကွင်းမှာအနိုင်ရဖို့နဲ့ ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရဦးမှာပါ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။